Ihe eji eji eme ihe
Hydraulic cylinder na-ezo aka na cylinder hydraulic. Hydraulic cylinder bụ ụdị hydraulic na-arụ ọrụ nke na-agbanwe ike hydraulic n'ime ike ọrụ ma na-eme usoro mmegharị (ma ọ bụ swing motion). Ọ dị mfe na nhazi ma nwee ntụkwasị obi na ọrụ. Mgbe ole ...
Etu esi ahazi ihe eji arụ ọrụ hydraulic
N'ezie, hydraulic cylinder bụ akụkụ dị mkpa nke akụrụngwa igwe. Okwesiri iru ihe ndi choro, oria, oghere ntinye na oke ntinye nke akụrụngwa niile. Ọdịdị kọmpụta pụrụ iche nke igwe ihe eji arụ ọrụ, njedebe nke cylinder siri ike. Mgbe d ...
Etu ị ga-esi jigide silinda hydraulic
Mee ezigbo ọrụ na nhicha, chọọ ịrụ ọrụ dị mma na mmezi nke hydraulic cylinder, mgbe ahụ ọ ga-arụ ọrụ dị ọcha nke nhicha. Nke a bụ akụkụ dị oke mkpa, hydraulic cylinder na usoro iji rụọ ọrụ ogologo oge ga-ewepụta ọtụtụ ájá na nsị, ọ bụrụ na ehichaghị ya n'oge, ọ ga-agbanye ...